Waxaa lagugu martiqaadayaa inaad ku soo biirto WithinReach dhacdo Taxane Waxbarasho oo bilaash ah (virtual) mid ka mid ah arrimaha caafimaadka ee maanta ugu adag uguna saamaynta badan: koriinka caruurnimada hore.
WithinReach maamulaha guud, Kay Knox, dhexdhexaadin doona guddi ka kooban saddex hoggaamiye oo muhiim ah - Dr. Shaquita Bell, Dr. Sarah R. Lytle iyo Dr. Debra Ren-Etta Sullivan in laga hadlo nidaamyada taageerada qoysaska iyo ficillada lagama maarmaanka u ah horumarinta caafimaadka dhammaan.
Taxanaha Waxbarashadu waxa uu dhici doonaa Arbacada, Sebtember 16, laga bilaabo 5:30 ilaa 6:30 galabnimo iyada oo loo marayo Zoom, oo leh gole dambe oo ikhtiyaari ah, 30-daqiiqo dood qol ah oo go'doon ah. Marka laga soo tago la socodka, marxaladaha muhiimka ah iyo baadhista, waxa aanu eegi doonaa waxa ka maqan wada-hadalkii horumarinta carruurnimada hore, iyada oo loo marayo dood lagu habeeyey cilmiga sayniska iyo bulshada labadaba.
XaqiiqooyinkaCarruurta bilaabay xanaanada gadaashooda facooda lagama yaabo in ay waligood la kulmaan. Farqiga guuleysiga wuxuu ku bilaabmaa farqiga fursadda, kaasoo muuqda marka uu sagaal bilood jiro. Gobolkayagu waxa uu ka shaqaynayay sidii qoysaska loogu fududayn lahaa inay helaan agabka, laakiin wali maanu joogin. Faafida COVID-19 waxay iftiiminaysaa sida ay muhiimka u tahay qoysasku inay awood u yeeshaan inay helaan agabka ay u baahan yihiin, marka ay u baahan yihiin. Waxaan rajaynaynaa inaan mawduucan iyo codadkan xoogga leh u keeno bulshadeena anagoo adeegsanayna Taxanaha Barashada.
Wax badan ka baro oo iska diiwaan geli dhacdada Taxanaha Waxbarashada WithinReach ee bilaashka ah maanta!
Dhexdhexaadiyaha Kay Knox, Agaasimaha Guud ee WithinReach, ayaa lagu sharfay inuu la midoobo koox ka kooban hoggaamiyeyaasha muhiimka ah ee horumarinta carruurnimada hore; oo khibrad u leh caafimaadka carruurta, sayniska maskaxda, waxbarashada iyo sinnaanta caafimaadka.
Isaga oo ah madaxa fulinta ee WithinReach, Kay waxa uu ka caawiyay hogaaminta shaqada WithinReach in ka badan 20 sano. Ka hor inta uusan noqon maamulaha guud, Kay waxa uu soo noqday agaasime ku xigeen iyo madaxa hawlgelinta. Waxay shahaadada Masterka ee Maamulka Dadweynaha ka qaadatay Dugsiga Evans ee Siyaasadda Dadweynaha & Maamulka ee Jaamacadda Washington, waxayna ka shaqaynaysay caafimaadka bulshada iyo qaybaha aan faa'iido doonka ahayn in ka badan 25 sano. Intii ay ku jirtay shaqadeeda, Kay waxa ay diiradda saartay horumarinta natiijooyinka caafimaadka ee dhinacyada cudurrada daba-dheeraada, AIDS-ka iyo STD-yada, iyo Caafimaadka Hooyada, Ilmaha iyo Qoyska.
Dr. Shaquita Bell
Waxay ku dhalatay kuna kortay Minnesota, Dr. Shaquita Bell waa Cherokee dhanka hooyadeed iyo Afrikaan-Maraykan ah xagga aabbaheed. Waxay ku dhammaysatay dugsiga caafimaadka ee Jaamacadda Minnesota, ka dib waxay u sii gudubtay degenaanshaha carruurta ee Jaamacadda Washington, oo ay dhammaysay 2009. Waxay ku hadhay Seattle Children's oo dhammaystirtay sannad dugsiyeedka degenaanshaha, iyada oo noqotay qofkii ugu horreeyay ee deggan dhalasho Maraykan ah. Dr. Bell hadda waa dhakhtarka carruurta ee xarunta caafimaadka bulshada, Odessa Brown. Iyadu waa isku-duwaha goobta ee dadka deggan caafimaadka carruurta. Dr. Bell waa borofisar ku-xigeenka caafimaadka ee Seattle Children's iyo Jaamacadda Washington ee qaybta Caafimaadka Carruurta Guud. Intaa waxaa dheer, iyadu waa Agaasimaha Caafimaadka ee Xarunta Kala duwanaanshaha iyo Sinaanta Caafimaadka ee Seattle Children's. Iyadu waa Guddoomiyaha Akademiyada Maraykanka ee Dhakhaatiirta Carruurta, Guddiga Caafimaadka Carruurta ee Dhaladka Mareykanka. Dr. Bell wuxuu kaloo maamulaa kooxda shaqada tahriibinta ee Seattle Children's.
Dr. Sarah R. Lytle
Dr. Sarah R. Lytle waa agaasimaha wacyigelinta iyo waxbarashada ee Machadka Barashada & Sayniska Maskaxda (I-LABS) ee Jaamacadda Washington. Dr. Lytle waa khabiir ku takhasusay korriinka ilmaha oo leh in ka badan toban sano oo waayo-aragnimo ah isku xirka sayniska si loogu tababaro goobta waxbarashada hore. Waxay qibrad u leedahay la xiriiridda cilmi-baaris adag oo siyaabo la heli karo waalidiinta, bixiyeyaasha waxbarashada hore iyo siyaasad-dejiyeyaasha. Dr. Lytle waxa uu shahaadada BA ee Cilmi-nafsiga iyo Isbaanishka ka qaatay Jaamacadda Notre Dame iyo Ph.D. ee Cilmi-nafsiga Horumarinta ee Jaamacadda Temple. Cilmi-baadhisteedu waxay diiradda saartay horumarinta luqadda dhallaanka iyo socod-baradka. Dr. Lytle waa xubin ka mid ah Zero To Three Academy of Fellows.
Dr. Debra Ren-Etta Sullivan waa Madaxweynihii hore ee Machadka Horumarinta Carruurta Madow ee Seattle, halkaas oo ay diiradda saaratay hirgelinta jawi waxbarasho oo ku habboon carruurta Madow iyo la shaqaynta qoysaska iyo beelaha si ay u kordhiyaan u doodista carruurtooda. Buuggeeda saddexaad, Cultivating the Genius of Black Children, wuxuu ku hagaa macallimiinta abuuritaanka fasallo taageera baahida waxbarasho ee carruurta madow iyo carruur kale oo badan oo leh baahiyo waxbarasho oo la mid ah. Iyadu waa Aasaasaha iyo Agaasimaha Fulinta ee Ashé Preparatory Academy, qaabka ku darida P-12 ee ku salaysan kobcinta garaadka waxqabadka bulshada. Dr. Sullivan waa aasaasihii Machadka Praxis ee Waxbarashada Carruurnimada Hore - urur kala duwan oo bixiya waxbarasho iyo horumarin xirfadeed. Waxa ay ka shaqaynaysay waxbarashada sare muddo 40 sano ah iyada oo ah macallimad, cilmi-baare, soo-saare manhaj iyo maamule waana Xubintii hore ee maamulka ee Ururka Qaranka ee Waxbarashada Carruurta Yaryar (NAEYC).